रिसाएकी पत्नीलाई फकाउने तरिका : शरीरभरी ‘म धोकेबाज हुँ...’ लेखिएको ट्याटु !
Tuesday, 8 Jan, 2019 3:51 PM
२४ पुस, काठमाडौं । श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्धमा धोकाको बादल मडारियो भने कसरी सम्बन्ध सुधार्ने ? एक धोकेबाज पतिले आफ्नी रिसाएकी पत्नीलाई मनाउन गरेको हर्कत थाहा पाउँदा तपाईं पनि अचम्ममा पर्नुहुन्छ । उक्त हर्कतका कारण उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् ।
जोस टेरेस नामका यी व्यक्तिले आफ्नो पत्निलाई धोका दिएका थिए, जसका कारण उनकी पत्नी उनीबाट टाढा भइन् । पत्नीलाई फेरी पाउन उनले आफ्नो गल्ती स्विकारेको ट्याटु खोपे ।
ट्याटुमा उनले आफू धोकेबाज भएको र यौन व्यावसायी कहाँ जाने गरेको लेखेका छन् । जोसको यस भाइरल ट्याटुको तस्विर ट्याटु आर्टिस्टले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए ।
यद्यपि, ट्याटुमा लेखिएका केही शब्दको स्पेलिङ गल्ती देखिएका छन् र ट्याटु आर्टिस्टले उनी मुल रुपले बेलायती नभएको बताएको छ । अंग्रेजी उनको दाश्रो भाषा हो । जोसले आफ्नो छातीदेखि पेटसम्मको ट्याटुमा लेखेका छन्, ‘म जोस टेरेस, २ जनवरी २०१९ का दिन यो ट्याटु आफ्नै मर्जीले बनाइरहेको छु । म आफ्नो पत्नीको विश्वास फेरी पाउन चाहान्छु र मेरो कारण वैवाहिक जीवनमा आएको दुःख र पिडाका कारण यो गरिरहेको छु ।’
यी व्यक्तिले आफ्नो गल्ती स्विकार्दै ट्याटुमा लेखेका छन्, ‘म हुँ जाली, धोकेबाज, चालबाज, धूर्त, यौन व्यावसायीलाई मन पराउने, बेइमानी र सम्मान नगर्ने ।’
सामाजिक सञ्जालमा यो तस्विरलाई लिएर मानिसहरुले विभिन्न खाले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । केही वैवाहिक जीवन अन्त्य गर्न सल्लाह त केहीले जोसकी पत्नीलाई माफ गर्न आग्रह गरेका छन् । ट्याटु बनाउने कलाकारले शब्दमा केही गल्ती भएको स्विकारेका छन् ।
आफू अंग्रेजीमा कमजोर भएकोले आफ्ना ग्राहकलाई आफैँ शब्द लेख्न बताउने गरेको बताए ।